कपाल र नाईका लागि व्यावसायिक कैंची सहायक उपकरणहरू - जापान कैंची
व्यावसायिक हेयरड्रेसिङ कैंची सहायक उपकरण
घर / व्यावसायिक हेयरड्रेसिङ कैंची सहायक उपकरण
तपाईको लागि उत्तम सामानहरू ब्राउज गर्नुहोस् कपाल कैंची र नाई कपाल!
तपाईलाई रक्षा गर्नुहोस् एक केस मा कपाल कैंची, पाउच, वालेट, वा होल्स्टर तिनीहरूको जीवन सम्भव सबैभन्दा लामो छ भनेर सुनिश्चित गर्न! पेशेवर, प्रशिक्षु र घर-उपयोग हेयरस्टाइलको लागि उत्तम मूल्य कपाल कम्ब्स किन्नुहोस्।
तपाईंको सफा गर्न, पालिस गर्न र तेल गर्न मर्मत किटहरू कपाल काट्ने कैंची। तपाईंको कैंचीमा खिया लाग्दैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न तेलको कलम किन्नुहोस्।
सैलुन र नाई पसलहरूको लागि उत्तम कैंची सामानहरू किन्नुहोस्!
हेयरड्रेसिङ कैंची हेरचाह र रखरखाव किट: फिक्स, सफा, सुरक्षा र तेल
10 टुक्रा एन्टि-स्टेटिक कम्बा सेट हेयरस्टाइल र कपाल को लागी
जेपी बनावट र Feather हेयरस्टाइल र भोल्युमको लागि स्टाइलिङ रेजर
जापान कैंची बाट $ ०.०० एडीडी $ ०.०० एडीडी
तपाईंको कपाल कातरहरू कायम राख्न केश ड्रेसिङ कैंची तेल पेन
हेयरड्रेसिङ सिजर मेन्टेनन्स किट: सफा, तेल र फिक्स शियरहरू
अष्ट्रेलियाको कपाल, सैलून र नाईका पेशाकर्मीहरू आफ्नो कैंचीका लागि उत्तम सामानहरू किन्न खोजिरहेका छन्।
अष्ट्रेलियामा कपाल र नाईहरूको लागि उपलब्ध शीर्ष सामानहरू:
कपाल कैंची पाउचहरू
कपाल केसिंग केसहरू
कपाल स्टाइलिस्ट उपकरण बाकस
कंघी, कपाल क्लिप, र अधिक
Scissor तेल ब्रश कलम
केश कपाल कैंची मर्मत किट
अनलाइन हेर्दा, यो आश्चर्यजनक रूपमा उच्च-कपालको हेयरड्रेसि sc कैंची सामानहरू पाउन गाह्रो छ। हामी eBay र अमेजन खरीद गर्न बेवास्ता, किनभने तिनीहरू व्यावसायिक गुणवत्ता छैन।
त्यसैले जापान कैंचीमा टोलीले उच्च-गुणस्तरको क्यान्सर सामानहरू जस्तै पाउचहरू, कैंची वालेटहरू, छालाको कपाल संरक्षणकर्ता, र मर्मत किटहरू खोजी गरेको छ।
जब अष्ट्रेलियामा सब भन्दा राम्रो कैंची पाउचहरू खोज्दै, हामी छालालाई नाई र कपालका टूलहरू जोगाउन उत्तम सामग्रीको रूपमा छनौट गर्यौं।
प्रामाणिक छालाबाट बनाइएको छाला होलस्टरहरू कपाल र कपालका लागि उपलब्ध छन्। To देखि १० सम्म कैंची समातेर, यी होल्टरहरूले तपाईंको कपाललाई नाई पसल र सैलुनमा सुरक्षित गर्दछ।
हेयरस्टाइलिस्टहरू अब सुरक्षा केस केस, पाउच, र टूलबक्सहरूमा पहुँच गर्न सक्षम छन् जुन उनीहरूको क्यान्सर, कम्बिज, क्लिप, कपाल, र सैलुनमा अन्य सबै सामानहरू भण्डारण गर्दछ।
कपालको स्याहारबाट कपालका कपाल र नाईको क्यापसम्म, यी सहायक उपकरणहरू अष्ट्रेलियामा पेशेवरहरूका लागि उत्तम मूल्यमा उपलब्ध छन्।
नेकको लागि घाँटी छुरा र शेभिंग किट्स जापान कैंचीमा उपलब्ध सबैभन्दा लोकप्रिय सामानहरू हुन्। प्रत्येक रेजर जापानमा बनेको बदल्ने ब्लेडको साथ स्टेनलेस स्टीलबाट बनेको हुन्छ।
यो दाह्री दाह्री किटहरू पत्ता लगाउन सजिलो छैन जुन दुबै राम्रो गुण र सबै भन्दा राम्रो मान हो। किभ शेभिंगमा प्रयोग गरिएको ठ्याक्कै सपाट किनारा बदल्न योग्य ब्लेडहरूले नाइनिंगलाई ब्ल्याड सफा र मर्मत नगरी ग्राहकहरूको बिच काट्न अनुमति दिन्छ।